Qudaartii Halista Badneyd Ee Stamford Bridge, Kooxdii 15ka Cayaaryahan Ku Cayaartay & Dhacdooyinka Ugu Layaabka Badan Ee Kubadda-cagta – Garsoore Sports
Qudaartii Halista Badneyd…
Taariikhda isboortiga ugu caansan adduunka waa mid cajiib ah.
Qarniyo ayaa kasoo wareegtay markii la bilaabay isboortiga aan hadda ugu yeerno kubbadda-cagta (ama wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto), taniyo markii la bilaabayna, taariikh ayaa la sameeyay.
Dhammaanteen waanu ogsoonnahay qaar kamid ah taariikhihii xusuusta badnaa sida kubbad-gacmeedkii caanka ahaa ee Diego Maradona waxaanan ognahay qaar kamid ah sheekooyin kubbada-cagta ah oo aad u murugo badan, laakiin waxa aynaan ogeyn waa qaar kamid ah dhacdooyin layaab leh oo taariikhda kubbada-cagta ku diiwaangashan.
Sida wax kasta oo taariikh leh, kubbadda cagta waxay leedahay qaar kamid ah sheekooyinka ugu layaabka iyo qosolka badan – sheekooyin kugu sababi kara inaad madaxa ruxdo adigoonan rumaysnayn.
Haddaba dib u fadhiiso oo ku raaxayso sheekooyinka kubbada-cagta ee ugu layaabka badan abid.
Oo waxaan ballan qaadayaa, mid walba oo kamid ah sheekooyinkan soo socda inay dhab ahaantii dhab yihiin.
Marka aad dhammeeysato ha hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada si ay iyagana uga warhelaan qormadan xiisaha leh.
Qof Ayay Ahayd Inuu Qasaariyo Ugu Dambeyn
Aqoontaada ku saabsan heerka afaraad ee kubbadda-cagta wadanka Arjentiina waxaa laga yaabaa inaysan u sarreynin sida horyaallada kale ee adduunka qaarkood, marka waxaan dib ugu milicsaneynaa mid kamid ah taariikhaha xusuusta leh ee qaranka Koonfurta Ameerika.
Waxaan ku istaagi doonnaa xilli ciyaareedkii 2009/10 markaas oo ay qabsoomtay ciyaar u dhaxaysay kooxaha Juventud Alianza iyo General Paz Juniors wareegga isreebreebka Apertura ee Final-ka Ronda dhammaadka xilli cayaareedka.
Miyaadan xasuusan karin wixii dhacay? Waa wax caadi ah, balse anigaa kuu sheegaya ee ila joog.
Kaddib markii ay labada lug ee kulanka galeen natiijo ah 3-3, labada naadi waxay isla aadeen rigooreyaal si ay u go’aamiyaan cidda u gudbi doonta wareegga xiga ee tartanka.
Wali caadi ah oo mar walba dhaca.
Balse waxa kulankan layaabka ka dhigaya ayaa ah tiradii ugu badneyd ee abid lagu diiwaangeliyo rigooreyaal iyadoo kooxda Juniors ay ku badisay habeenkaas 21-20 goolal rigooreyaal ah.
Waxaa laga yaabaa in midda kasii yaabka badan ay tahay xaqiiqda ah in keliya hal rigoore la qasaariyay amaba la seegay- waa rigooradii ugu dambeysay ee kooxda Alianza oo uu laaday Ruiz, kaasoo uu badbaadiyay goolhayaha kooxda kale. Ilaa waqtigaas, dhammaan 40kii iskuday ee rigooreyaasha ah way dhaliyeen rigoore-laadayaasha .
Qalbi jab ayay u tahay goolhayaha Juventud Allianza, kaasoo ku guuldareystay inuu badbaadiyo mid kamid dhammaan 21kii rigoore ee uu la kulmay intii ay socotay is rasaasaynta kubbada.
Haku Fikirin Marnaba Inay Dhammaatay
Laga soo bilaabo dhammaad la yaab leh ilaa mid kale, Charlton Athletic ayaa sannad cayaareedkii 1957/58 ay ka horyimaadeen kooxda Huddersfield Town heerka labaad ee Kubbada-cagta Ingiriiska kulan hubaashii noqday mid ka mid ah kulamadii ugu cajiibsanaa abid waana mid ay tahay in aan halkan ku eegno.
Kulankan waxaa la cayaaray bishii December 1957, Charlton waxaa lagu soo koobay 10 nin cayaarta oo socota 27 daqiiqo kaddib markii kabtan Derek Ulton ay qasab noqotay in loo qaado isbitaal dhaawac garabka baxay aawadeed. in la beddelo amaba beddel la sameeyo lama oggoleen waqtigaas, isla markiiba, Huddersfield ayaa 1-0 ku hoggaaminaysay kooxda Charlton kaddib gool uu dhaliyay cayaaryahan Les Massie.
Huddersfield ayaa sii dheerreeysatay hoggaankeeda iyadoo laba gool uu u dhaliyay Alex Bain halka Bill McGarry uu shabaqa soo taabtay iyadoo goolka kale uu ka yimid Bob Ledger oo hoggaanka kooxdiisa ka dhigay 5-1 iyadoo 27 daqiiqo ay ka harsan tahay cayaarta kahor inta wax aan caadi ahayn oo cajiib ah aanay dhicin.
Johnny Summers oo ah dhaliyihii goolkii koowaad ee Charlton iyo Johnny “Buck” Ryan ayaa min hal gool u dhaliyay Charlton laba daqiiqo gudahood si ay u yareeyaan farqiga oo ay cayaarta ka dhigaan 5-3. Summers ayaa markale shabaqa soo taabtay daqiiqadihii 73aad iyo 78aad isagoo ciyaarta ka dhigay barbarro shan gool ah kahor inta uusan dhalin goolkiisii ​​shanaad ee habeenkaa daqiiqaddii 81aad si uu Charlton ugu dhiibo hoggaan 6-5 iyagoo 10 cayaaryahan ku cayaaraya.
Taageerayaashii kooxda Charlton Athletic oo badankood ka tagay garoonka markii kooxdoodu 5-1 lagu hoggaaminayay iyagoo cayaaryahan uu ka maqanyahay ayaa ka qoomameeyay go’aankoodii markii ay ka war heleen in kooxdooda ay cayaarta soo bareejeeysay oo ay hoggaamineyso haatan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Huddersfield ayaa barbarro keensatay iyadoo shan daqiiqo keliya ay cayaartay ka harsantahay kahor inta aanay Charlton Athletic iyana dhammaadkii cayaarta la iman goolkoodii todobaad kaasoo u sahlay in ugu dambeyn guul 7:6 ay ku gaarto 10 cayaaryahan.
Laga soo bilaabo natiijo ahayd 5-1 oo daqiiqaddii 63aad koox 10 cayaartooy ah lagu lahaa, Charlton Athletic waxay u dagaalantay sidii ay u guuleeysan lahayd iyagoo si la yaab leh u diiwaangeliyay soo laabashadii ugu weyneyd taariikhda.
Dib u soo laabashadii caanka ee kooxda Arsenal ay ka gaartay kooxda Reading sannadkii 2014 oo kusoo dhammaatay natiijo 7:6 ah ayaa lala barbar dhigaa middan.
Qudaartii Halista Badneyd Ee Stamford Bridge
Sheekooyin aad u xiiso badan oo liiskan ka muuqda ma aysan ahayn tobankii sano ee lasoo dhaafay, waa waqti ka horreeyay laakiin waxaan halkan ku haysannaa middii ugu dambeeysay kuna saabsan taageerayaasha aaminka ah ee Stamford Bridge, guriga kooxda kubbada-cagta Chelsea.
Waxaa laga yaabaa inaadan wax ka ogeyn kooxda Galbeedka London, laakiin taageerayaasha Chelsea waxay keeni jireen garoonka Stamford Bridge muddo tobanaan sanno ah geedka la yiraahdo ‘Celery’ ee sawirkiisu kor idiinkaga muuqdo – waxay u badan tahay inay ku xushmeeynayaan heesta taageerayaasha ee caanka ah ee “Celery” (digniin: luqad aan habboonayn).
Si kastaba ha ahaatee, sida ku cad bayaan kooxeed oo soo baxay sannadkii 2007, Blues waxay xusuusisay taageerayaasha in keenista miraha Celery ay dhab ahaantii tahay sharcidarro iyo in taageere kasta oo la qabto isagoo garoonka keenaya khudaarta “khatarta ah” uu wajihi karo ganaax cimrigiisa oo dhan ah oo laga ganaaxo garoonka Stamford Bridge.
Ceeryaamadii White Hart Lane
Kooxda Arsenal ayaa cayaar-saaxiibtinimo sannadkii 1945 kula cayaartay Dynamo Moscow ceeryaamo aad u badan garoonka White Hart Lane inkastoo ay ku booriyeen cayaartoyda inay cayaarta joojiyaan ceeryaamadda darteed, garsooraha ayaase go’aansaday inay cayaarta sii socoto.
Ceeryaamadda ayaa ahayd mid aad u qaro weyn oo cayaartu u beddeshay mid nooc kale loo cayaaro kubbada, iyadoo labada dhinacba ay ku cayaarayeen xeerar u gaar ah maadaama ay la kulmeen nasiib xumo iyaga u gaar ah oo ay sababtay cimilada xun.
Kooxda Moscow ayaa mar sameeysay beddel laakiin ma aysan ka saarin hal cayaaryahan garoonka, iyadoo taageerayaashii daawanayay cayaarta ay rumeysan yihiin in kooxda Ruushka ay garoonka kula jirtay ilaa 15 cayaartoy.
Arsenal ayaa sidoo kale sameysay wixii ugu fiicnaa ee xaaladdaas, iyadoo mid ka mid ah ciyaartoydooda – oo mar hore casaan la siiyay – uu si dhuumaaleysi ah kusoo galay garoonka oo uu cayaaray inta ka hartay cayaarta.
Si kastaba ha ahaatee, waxay la kulmeen xoogaa nasiib xumo ah, iyadoo goolhayehoodu uu qabow dartii uu ku dhacay birta goosha kaddib markii uu u orday dhinac aanu arkeynin cimiladda darteed. Daawade ayaa la sheegay inuu booskiisa goosha buuxiyay oo ay cayaarta siddaas kusii socotay.
Natiijada ugu dambeeysa ee cayaarta ayaa ahayd guuldarro 4-3 ah oo soo gaartay kooxda Arsenal cayaar aysan natiijadu muhiim u ahayn labada kooxoodba.
Ma Jiro Wax Lamid Ah Merseyside Derby
Maalmahan, Everton iyo Liverpool ayaa ka mid ah kuwa ugu xifaaltanka badan horyaalka, iyadoo Derby-ga Merseyside -ka uu kasoo muuqdo jadwalka taageerayaasha ugu badan ee kubadda-cagta ah.
Iyadoo Goodison Park (garoonka Everton) oo ku yaallo meel ku dhow Anfield Road (garoonkii Liverpool), labada naadi waxay ku koreen nacaybka iyo dabeecadda ay midba tan kale u qabto – iyadoo mid walba yoolkooda ugu weyn bilowga xilli ciyaareedka uu kamid yahay in ay ka adkaadaan tan kale .
Si kastaba ha ahaatee, waxa laga yaabo inaadan ka ogeyn labada naadi ayaa ah kahor inta uusan xifaaltanka jirin, guriga Everton wuxuu ahaa dhab ahaan ahaa Anfield Road – waa dhulka ay Liverpool hadda ugu yeerto gurigooda iyo mid ka mid ah garoomada ugu adag ee loo martiyo kubbada-cagta adduunka.
Sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee Everton, dhulka ku yaal Anfield Road waxaa la kiraystay intii lagu jiray dabayaaqadii 1800kii waxaana kireystay walaalaha Orrell oo kamid ahaa dadka deegaanka.
Toffees ayaa kulankoodii ugu horreeyay ku cayaaray Anfield oo ay la cayaareen kooxda Earlestown 27-ka Sebtember, 1884, waxayna cayaareen kulankoodii ugu horreeyay ee Kubbada-cagta iyagoo ah koox xirfadle ah Sebtember 8, 1888. Liverpool, ayaa dabcan, la aas-aasay afar sano oo intaas kaddib taariikhda.
Everton waxay dooratay inay ka tagto garoonka Anfield Road 25-ka Janaayo, 1892 waxayna dooratay inay u dhaqaaqdo dhanka waqooyiga Stanley Park, dhulka iyo aagga hadda loo yaqaan Goodison Park. Liverpool (oo markaas doonaysay in loogu yeero Everton Athletic) ayaa markaa sheegan doonta Anfield Road inay tahay garoonkeeda.
Haa, haa, Everton dhab ahaantii waxay ku cayaari jirtay Anfield kahor Liverpool, taana waa taa.
Barbarro Miyaan Iska Dhahnaa?
Kulamada dib loo dhigo ee horyaalka Ingiriis Premier League-ga iyo FA Cup-ka waa wax iska caadi ah, laakiin bal u fiirso inta jeer ee cayaarta Lincoln City iyo Coventry City dib loo dhigay sababtoo ah cimiladda oo aad u xun oo aawadeed xilli-cayaareedkii 1962/63.
Waxay ahayd in labada koox ay cayaaraan 5ta Janaayo, 1963, kulanka u dhexeeyay Lincoln iyo Coventry ayaa la baajiyay cimilada xun aawadeeda waxaana la qorsheeyay in la cayaaro maalmo kaddib.
Markii waqtigii la gaaray ayaa mar kale la baajiyay. Oo haddana la baajiy…. Oo haddana.
Cayaarta ayaa la joojiyay wadar ahaan 15 jeer kahor inta aan aakhirka cayaarta la cayaarin – waxay wadar ahaan noqotay 66 maalmood inta u dhaxaysa markii ugu horreeysay ee la qorsheeyay iyo markii ugu dambeeysay.
Coventry City ayaa aakhirkii 5-1 ku garaacday Lincoln City Maarso 15 keedii sannadkii 1963dii.
Waxaa qoray: Abdihakim Olad Hassan
Inter Oo Diiday Dalabkii £85 Milyan Ay Chelsea Ka Gudbisay Romelu Lukaku
Daawo Orodkii Cali Xasan Iidoow Ee 1500m (Muuqaal)